Kaadiboodu kaadiboodu | Crafts Na
Jenny monge | | Crafts, Ọrụ nka, Crafts maka ụmụaka
Ndewo onye obula! N’ọrụ nka taa anyị ewetara gị -esi mee ka a na-akpa ọchị kaadiboodu ladybug nnọọ mfe -eme ka na zuru okè n'ihi na ụmụntakịrị ga-ekpori ndụ na mgbe ahụ, icho mma ha shelf.
You chọrọ ịhụ ka ị ga - esi mee ladybọg a?
1 Ihe ndi anyi choro iji mee kaadiboodu anyi
Ihe ndi anyi choro iji mee kaadiboodu anyi
Black kaadiboodu na-acha uhie uhie ma ọ bụ oroma kaadiboodu. I nwekwara ike iji odo. Ana m akwado igosi ụmụaka foto dị iche iche ka ha wee bụrụ ndị na-ahọrọ ụdị ntụpọ ha chọrọ ime.
Gluu osisi ma ọ bụ ihe ọ bụla akwụkwọ gluu.
Anya maka nka ma ọ bụ okirikiri obere kaadiboodu ọcha
Onye na-achị, pensụl na mkpa
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ gbupịa warara site na kaadị ojii. Okpukpo nke warara a ga-egosi nke ladybug ahụ, yabụ ị nwere ike ịhọrọ ugbu a kedu ka ịchọrọ ihe oyiyi ahụ.
Anyị bepụrụ okirikiri na kaadiboodu uhie, oroma ma ọ bụ odo.
Anyị na-ese okirikiri nwere akara ojii na kaadị ikpeazụ a. Ha kwesiri i imitateomi specks nke ndị ladybugs na-eweta.
Anyị na-ebipụ okirikiri ahụ na ọkara iji nweta nku abụọ anyị gbaa akwụkwọ.
Ugbu a, ka anyị mee isi nke ladybugIji mee nke a, anyị gluu oji rektangulu na-eme gburugburu. Anyị na-eme okpukpu otu akụkụ nke gburugburu wee banye na nke ọzọ, ka anyị wee nwee ọdịdị nke okirikiri okirikiri. Gbalịa ka mmechi nke ochie gburugburu dị na isi ka o wee zoo karịa ya na ọnụ ọgụgụ ahụ ka mma.
Anyị na-agbanye akụkụ abụọ nke uhie / oroma / odo gburugburu, na-eitatingomi ọnọdụ nke nku nku na njikere ife. Anyị na-anyagide anya ọrụ aka na nhọrọ anyị nwere ike itinye obere antennas na kaadiboodu ojii.
Na njikere! N’oge na-adịghị anya, anyị ga-achịkọta ụmụ anụmanụ dị iche iche na kaadiboodu, na-echere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Crafts maka ụmụaka » Ladybob kaadiboodu
Na-akpụzi egwuregwu maka ụmụaka